Kedụ ihe anyị ga-ewere iji mee ka ebe ahụ dị ọcha | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Nuria | | Homelọ Green, Nzughari
E-n'efu Ebe dị ọcha na US
E gosipụtara anyị niile nsogbu nke otu esi tufuo ihe ochie na anyị nwere n'ime ụlọ nchekwa ebe ọtụtụ afọ n'amaghị nke ọma ihe anyị ga-eme ha, otu ụbọchị ka anyị kpebiri ime wee tụba ha n'ime akpa ebe anyị ka na-anụ "olu akọ na uche" nke na-agwa anyị na anyị na-eme ya ezighi ezi, na anyị na-emetọ gburugburu ebe obibi.
Ọ bụrụ na ị bụ otu ma ọ bụ otu n’ime ndị na-etinye aka ha n’isi, mara na e nwere ihe ngwọta. Mbụ bụ kpochapụwo edo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ containers maka akwukwo na kaadiboodu, iko na nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na enweghị otu agbata obi gị ma ọ bụ obodo gị, ị nwere ike ịgakwuru ndị kansụl obodo ma kọọ ya, ugbu a, ndị kansụl na-anaghị emegharị emegharị nwere ntaramahụhụ.
Ọ bụrụ na "ite" gị esoghị na otu mkpofu ahihia nke m kwuru na mbụ, ị ka nwere nhọrọ nke "ọcha ọcha»Ofu ma ọ bụ mobile ebe ị nwere ike ịhapụ ụfọdụ ụdị n'efu nke dị mma ma dị ka nke anyị nchekwaba ozuche nche Ọ na-agwa anyị na anyị ekwesịghị ịhapụ ya n'ime akpa nkịtị ma ọ bụ na ndị na-emegharị ihe.
Ọ bụ ihe efu na site na ọdịdị nke ihe mejupụtara ya awu na ha ga-tutu amama ke pụrụ iche osisi ma ọ bụ na ha nwekwara ike iso a yinye nke imeghari Ma bụrụ reused ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, dị ka kọmputa na ekwentị.
Ihe mkpofu anyị nwere ike iwepụ na ebe dị ọcha bụ:
- Batrị na BatrịIhe ndị mejupụtara ya, karịsịa Mercury, na-emerụ emerụ dị ukwuu.
- Mpempe akwụkwọ ọgwụ, a na-emegharị ha, ọkacha mma, na SIGRE dị ọcha na ụlọ ahịa ọgwụ.
- Obere irighiri ihe igwe dika ite ma obu ite.
- TV y ihe nlere, plastik, iko na ọla kewara.
- Ngwa ụlọ, a na-ekewapụ ihe ndị ahụ ma weghachite plastik na ọla.
- Mmanụ isi nri, na-recycled ka ịmepụta biodiesel.
- Mmanụ moto, A na-eji ya mee ihe maka isi mmanụ.
- CD na DVD, a na-emegharị rọba.
- Ropa, mpempe akwụkwọ, akwa nhicha ahụ na ihe niile textilesỌ bụrụ na ha nọ n'ọnọdụ dị mma, a na-enye ha onyinye maka ọrụ ebere, dịka akpụkpọ ụkwụ.
- X-ụzarị, a na-eweghachi nnu ọla ọcha na ihe ndị ọzọ.
- Ngwongwo, mpekere, junk, osisi, ị ga-eji ọrụ nchịkọta Halllọ Nzukọ Alaeze.
- Ragba ogwu Aerosol, a na-ekewapụta ihe ndị mejupụtara ya, na-emegharị nkwakọ ngwaahịa ahụ.
- Agba na ihe mgbaze, a na-ekewapụ ihe ndị ahụ ma na-emegharị ihe ndị ọzọ.
- Ihe mkpofu elektrọnik dị ka kọmputa y igwegharị ha dị iche na 90 pasent eji. A na-enye ndị na-arụ ọrụ nke ọma (80%) na reused na ndị na-adịghị arụ ọrụ ụlọ ọrụ ekwentị. Ha na-ekewapụ n'ime plastik na ọla (ọ nwere ndu na ihe ndị ọzọ carcinogens), ọ nwekwara ọla dị oke ọnụ ahịa.
- Ink cartridges, plastic na-recharged ma ọ bụ na-emegharị.
- Oriọna na-acha ọkụ, a na-emegharịghachi ọla na iko, mechie mercury.
- Gịnị, plastik na ọla na-ekewa ma gbanwee.
Na obodo niile nke Spain enwere ebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Na weebụsaịtị OCU enwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ntụpọ Finder ebe ị nwere ike ịchọta ụlọ kacha nso n'ụlọ gị. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ikwu na Ebe Nhicha ọ bụla nwere nke ya ụkpụrụ, ya mere ọ kacha mma iji kpọọ n'ihu iji hụ ihe ha nwetara na ihe ha na-anaghị enweta.
Anyị na-eweghachi ihe ndị a ebe anyị zụrụ ha: taya na enyo anya. A na-ebute sirinji insulin n'ụlọ ọgwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Homelọ Green » Kedu ihe anyị nwere ike iburu ebe dị ọcha
Jụọ, ị na-enweta matarasị?
Echiche ụgha banyere lithium
Ebili mmiri na-esite n’agagharị nke ebili mmiri